Home Wararka Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay safiirada Sacuudiga & Imaaraadka
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah safiirada Carbeed, gaar ahaan kuwa wadamada Qatar iyo Sacuudiga.
Ugu horreyn Madaxweynaha ayaa hoygiisa ku qaabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya Ahmed Bin Mohamed Al-Muwallad iyagoo ka wada-hadalay danaha labada dal.
Kulankan ayaa sidoo kale ujeedkiisa waxa uu ahaa salaan iyo Hambalyo uu safiirka la wadaagay Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha cusub ayaa maanta la kulmay safiirka Qatar u jooga Soomaaliya Ambassador Hassan bin Hamza Hashem, isaga oo ka guddoomay hambalyo iyo salaan.
Ambassador Hassan bin Hamza oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladdiisa ay garab siin doonto Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay, wuxuuna u rajeeyey inuu Eebbe u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo igmaday, kadib doorashadii Teendhada Afisyoone.
Kulamadan ayaa qayb ka noqonayo shirar uu maalmahan dambe Madaxweynaha ka wado magaalada Muqdisho, si uu u sameeyo wada-tashiyo ka hor dhismaha dowladdiisa cusub.
Guusha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn looga falceliyey, waxaana soo dhoweeyey dowladaha dariska iyo kuwa caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya.
Previous articleMW Xasan Sheekh oo Wada Kulammo logu Adeegayo Dalka.
Next articleGalmudug oo shaacisay waxa lagu sameyn doono haddii lasoo qabto Sheekh Shaakir
Fashilka doorashada: Maanta oo la qabanayo doorasho cidda ku tartamaysa aan...
Soomaaliya oo gabtay in ay bixiso lacagta xubanimada ee Qaramada Midoobay